ACTIVITIES | EverSpectrum M&E Engineering Co., Ltd | Page 2
Kathein Donation, Meditation Hall Donation, Breakfast, Lunch Donation
In year 2019 November, EverSpectrum had great occasion and memorable donation record for Kathein Robe Donation, Meditation Hall Donation, Food and Stationary Donation at Kyar Kan Yeik Thar Monastery, Thazin ....
Ever Spectrum Company Staff Dinner
Education Foundation And Stationary Donation
In 2019 June, EverSpectrum set up Education Foundation at Ah Lan Pya Monastery and stationary donation to 150 ....
Stationary & Lunch Donation To 200 Students
In 2019 February, we EverSpectrum made stationary donation to 200 students and sharing lunch to 500 villagers at Thamin Inn Gyone Village, Kyauk Tadagar Township, Bago Divion, Yangon, ....
EverSpectrum Year 2018 Annual Trip Memo Million thanks to everyone who isapart of ES’ family. We hope to be working together for many more years to get result ....
Waso Robe & Stationary Donation To Monks
In 2018 October, we EverSpectrum offer Waso Robe and Stationary to monk 310 at Sithagu Buddha University, Thanlwin Township, ....
ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ဗုဒ္ဓါဘိသေက အနေကဇာတင် မဟာမင်္ဂလာနှင့် ပင့်သံဃာတော်အပါး (၁၈၀၀၀) အား ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲ မိသားစုအလှူ
၂၀၁၈ ခုနှစ် နှစ်ဦးပထမဆုံးနေ့မှာ အမွန်မြတ်ဆုံးကုသိုလ်တစ်ခု ပြုခွင့်ကြုံရပါပြီ။ EverSpectrum မိသားစု ဒီထက်မက လှူဒါန်းနိုင်ပြီး ဘာသာ သာသနာအကျိုးကို စွမ်းစွမ်းတမံကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်သော သူတော်ကောင်းတရားနှင့်အညီနေထိုင်နိုင်သော Organization တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ပါစေ။ ယနေ့ပြုပြုသမျှသော စုပေါင်းအလှူအတွက် အနန္တသတ္တဝါအပေါင်းကို အညီအမျှပေးဝေပါတယ်။ ကုသိုလ်အဖို့ကို ရရှိကြ၍ နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။ ယနေ့လှူဒါန်းပူဇော်ရသော အအေး၊ ဖိနပ်အစရှိသော လှူဖွယ်ဝတ္ထုအစုစုတို့သည် သံဃာ့ဂုဏ်မြောက်အလှူဖြစ်ပြီး နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်း။ #We ....
EverSpectrum Year 2017 Annual Trip Memo
EverSpectrum Year 2017 Annual Trip Memo. Million thanks to everyone who isapart of ES’ family ever. We says special thanks to Ma Yee Mon Tun (Admin Manager) who ....
ပညာရေးအလှူ ( 2017)
ဒီကနေ့ ၂၄၊၆၊၂၀၁၇ နေ့မှာ ရင်ဘတ်ခြင်းနီးတဲ့ ညီလေးညီမလေးများနဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံး ပညာရေးအတွက် အလှူဒါနတစ်ခုပြုခဲ့ပါသည်။ တစ်ဦးမေတ္တာတစ်ဦးမှာ စေတနာထားပြီး တစ်ယောက်အနွံနာတစ်ယောက်ခံပြီး ရှေ့ဆက်ချီတက်ကြစို့ ညီလေးညီမလေးများ။ အတူတကွ ဆထပ်ထမ်းပိုးလှူနိုင်ကြစေရန်ဆုမွန်ချွေရင်း…… ညီ၊ညီမလေးများအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူိးအထူးတင်ပါတယ်။ ဒီနေ့လှူဒါန်းမှုသည် မိမိတို့၏ဖြူစင်သောချွေးနဲစာလေးများကို ဒါနကုသိုလ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး ကုသိုလ်အဖို့ကို အားလုံးသော သတ္တ၀ါအနန္တတို့အား အညီအမျှခွဲဝေပေးပါတယ်။ အမျှ အမျှ ....
© 2017-2021 Everspectrum M&E Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved.